Zvirongwa zvakakura zveJamaica Gurukota Rezvekushanya muUK uye Middle East
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Zvirongwa zvakakura zveJamaica Gurukota Rezvekushanya muUK uye Middle East
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Mutungamiri wepasirese wekushanya ane chirongwa cheJamaica chakasiirwa UK uye Middle East. Ane chirongwa chakakura, ajenda hombe, uye makuru makuru zviroto.
Kutevera misika yake yakabudirira blitz kuNorth America, Gurukota rezveKushanya, Hon. Edmund Bartlett akasiya chitsuwa nezuro, achiperekedzwa nechikwata chepamusoro-soro kuti vaongorore mikana yekudyara uye kuridza rwendo rwekushanya kuenda kuJamaica kubva kuUnited Kingdom (UK) nekuMiddle East.
Vasati vaenda, Gurukota Bartlett vakati, "Patiri kutsvaga kuti indasitiri yezvekushanya iwedzere, ndichave ndichitungamira nhume kuUnited Arab Emirates (Saudi Arabia), Saudi Arabia neUnited Kingdom." kutsvaga mikana yekudyara kwakananga kune dzimwe nyika (FDI) munharaunda yedu yekushanya pamwe nekumisikidza vanosvika kubva kumusika wedu wechitatu wekutanga. "
Vati kudyara mari kuchaita basa rakakosha mukugadzirisa kushanya nekupa mari inodiwa kuvaka nekuvandudza mapurojekiti akakosha mukusimudzira nekusimudzira kwekushanya.
Blitz inotanga nekutarisa musika wekufamba kuDubai World Expo 2020 muUnited Arab Emirates. Jamaika iri pakati pevaratidziri vanopfuura zana nemakumi mairi paexpoo ne pavilion inoratidzira zvigadzirwa zvechinyakare nekuvandudzwa pasi pehurukuro inoti "Jamaica Inoitisa Kufamba", ichibatanidza nyika kuburikidza nemimhanzi yayo yakasarudzika, chikafu, mitambo, uye mamwe mativi enhaka yayo yakapfuma.
Vachiri muUAE, Gurukota nechikwata chavo vachasangana neHurumende Yezvekushanya kuti vakurukure kubatana kwekudyara kwekushanya kubva mudunhu iri; Middle East matanho ekushanya; negedhi rekupinda kuNorth Africa neAsia, uye kufambisa nendege. Zvakare, pachave nemisangano nevatungamiriri veDNATA Tours, iyo chete hombe yekushanya mutyairi muUAE; nhengo dzeJamaican Diaspora muUAE; uye matatu makuru maAirlines kuMiddle East - Emirates, Ethiad neQatar.
Kubva kuUAE, Gurukota Bartlett vachananga kuRiadh, Saudi Arabia, kwavachataura ku5th Chirangaridzo cheRamangwana Investment Initiative (FII). FII yegore rino inosanganisira hurukuro dzakadzama nezve mikana mitsva yepasi rose yekudyara, kuongororwa kwemaindasitiri mafambiro, uye netiweki isina kufananidzwa pakati pevakuru vakuru, vatungamiriri venyika, uye nyanzvi. Achabatanidzwa naSenator Hon. Aubyn Hill pachinzvimbo chake seGurukota Pasina Portfolio mu Ministry of Economic Growth uye Job Creation (MEGJC), ane basa reMvura, Nyika, Bhizinesi Process Outsourcing (BPOs), Special Economic Zone Authority yeJamaica nemapurojekiti akakosha.
Kusimudzwa kwazvino kwezano reHurumende yeUK pamusoro pekufamba kwese kusingakoshi kuenda kuJamaica kwagadzira nzira yekuti Gurukota Bartlett vatungamire timu yepamusoro-soro kuenda kuLondon, Gumiguru 30 kusvika Mbudzi 6, yakanangana nemusika weUK. Kubatanidzwa kwevatori vechikamu kwakakosha kuchaitwa neVirgin Atlantic, China Foramu neBritish Airways kuWorld Travel Market London (WTM), mumwe wemisangano yakakosha yegore rose yenzvimbo yekufamba kwenyika.
Zvakare, gurukota rezvekushanya richava muenzi akasarudzika pa9th Advocacy Kudya kwemanheru kwePacific Asia Travel Association. Mukuenderera mberi kwemabasa ake epasirese, achazotora chikamu muUN World Tourism Organisation, World Travel uye Tourism Council neMusangano weVatariri veWTM.
Rwendo rwakazara urwu rwunosanganisira kubvunzurudzwa kwenhau, kutaurirana musangano kuCity Nation Place Global Conference muLondon, musangano webhodhi weGlobal Tourism Resilience neCrisis Management Center (GTRCMC), uye musangano nenharaunda yeJamican Diaspora kuUK.